नेपाली फिल्मले किन देशको कथा भन्न सक्दैन ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsनेपाली फिल्मले किन देशको कथा भन्न सक्दैन ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- गायक पशुपति शर्मालाई लुट्न सके लुट बोलको गीत सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि यो खालको बिबाद र चर्चा हुन्छ भन्ने सायद लागेको थिएन होला ।
तर, लुट्न सके लुट गीत सार्वजनिक भएको २ दिन नवित्दै उनले यूटुबबाट गीत हटाउनुपर्यो ।
यो गीत हटाउनु अघि बरु चर्चा भएको थिएन, गीत हटेपछि यो गीतले देश हल्लायो । यो गीतको बिबादले संसदमा समेत प्रवेश पायो । पशुपति शर्मालाई रकम दिने घोषणा समेत भयो । २ दिनमा जे जती भयो, यो आफैमा एउटा उच्च चर्चा थियो । जसले पशुपति शर्माको एउटा गीतको क्षमता मात्र देखाएन, गीतको शक्ति पनि प्रदर्शन गर्यो ।
पशुपति शर्मा मात्र होइन, देश नै हल्लाउने गीत यसअघि पनि बनेका छन् । गाउँ गाउँबाट उठ बोलको बलिदान सिनेमाको गीतले पनि देश हल्लाएको हो ।
गीतमा यो खालको शक्ति हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् पशुपति शर्माले । यसैले त गीतसंगीत, सिनेमामा त्यो खालको पावर हुन्छ भनिन्छ ।
गीतको बिषयमा कुरा गरिरहँदा अब सिनेमाको शक्तिको बारेमा कुरा गरौ । एउटा सिनेमा गीत भन्दा लामो मात्र हुँदैन, त्यसले करिब २ घन्टाको सिनेमामा धेरै कुरा बोल्न पनि सक्छ ।
तर, के नेपालमा राष्ट्रले नै ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने कथामा सिनेमा बनेका छन् । जनयुद्धकालको समयका बनेको आगो, बलिदानको कथामा बनेको बलिदान जस्ता सिनेमाले केही मात्रामा प्रभाव पारेका थिए । तर, अहिले बनेका सिनेमा यी सबै कुराबाट टाढा छन् ।
नेपाली मेकरहरु अहिले देशको कथामा सिनेमा बनाउन खासै रुचाउँदैनन् । केही समय अघि कलाकार नवल खड्काले दशगजा भन्ने सिनेमा बनाउँदा चर्चा भएको थियो । आफूलाई मार्ने धम्की समेत आएको भनाई नवलले सार्वजनिक गरेका थिए ।
नबलको यो भनाई सही थियो या प्रचारका लागि थियो, खासै भेउ पाउन सकिएन । नेपाली सिनेमा सस्तो कथामा अल्झिएका छन् । मेकरहरु पनि सानो सानो कथामा रंगिएका छन् । हाँसो, प्रेम र रोदनको वरिपरी नै नेपाली सिनेमा घुमेको पाइन्छ ।
नेपाली फिल्मले देशको कथा भन्न छाडेको छ । दर्शकलाई चासो र चर्चा हुने बिषयमा नेपाली सिनेमा बग्न छाडेको लामो समय भैसकेको छ । मेकरहरु जोखिम भन्न रुचाउँदैनन् । बरु, सस्तो कथामा रुमल्लिएर त्यसमै हराउन मेकरहरुलाई सहज लाग्न थालेको छ ।
एउटा गायकले देश हल्लाउने क्षमता राख्छन् भने सिनेमाले पनि सक्छ । तर, यस्तो प्रयास कसले गर्ने ?